Ọkachamara ma ọ bụ gibbophobia, hydrophobia, dịka a na-akpọ ọrịa a - ọrịa na-egbu egbu nke na-eme na nkịta mgbe ọrịa nke ọrịa ọzọ na-arịa. Taa, ụkọ rabies dịkarịsịrị n'ebe ndị nwere ọtụtụ ndị na-enweghị ebe obibi na ndị nwere ike ibute ọrịa site na anụ ọhịa. N'ebe ndị dị otú ahụ, ndị mmadụ nọkwa n'ihe ize ndụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị anụ ahụ, kamakwa onye ahụ nwere ike ibute ọrịa ahụ.
Kedu ka ụba si agbasa n'ime nkịta?
E nwere ọtụtụ ụdị ụgbụ na nkịta.
N'okpuru ụdị nke anụ ahụ bụ anụ na-edeghị ede, na-erubeghị isi, ọ naghị eme ọbụna iwu kachasị mfe. Nkịta na-etinye aka n'ebe gbara ọchịchịrị ma jụ iri nri. Mgbe ahụ, ọnọdụ a nwere ike dochie anya nchegbu, ihere na iwe. Nkịta na-ahụ anya, na-egwu egwu, nwere ike jiri ịnụ ọkụ n'obi rie ihe dị iche iche a na-apụghị ịbanye na ya, ma na-ajụ iri nri.
Kedu otu esi ekpebi rabies na nkịta? Otu njirimara nke njirimara nke nje ndi iro bu ihe omimi nke akwara pharyngeal, ya bu, o siri ike nye anu ka o rie mmiri. N'okwu a, nkịta nwere nnukwu mmanụ, ụgbọ mmiri na-adụ ụda wee gbanwee. Mgbagwoju anya dochie mwakpo nke ime ihe ike, mgbe anụ ahụ gwụrụ na-ada ụra. Otú ọ dị, ụda ọ bụla ma ọ bụ mkpu ọ bụla nwere ike ịkpalite mmegide nke mwakpo.
Oge ụfọdụ na-agafe ma nkịta na-agwụ ike, olu ya na-apụ n'anya, ahụ ya na-akpọnwụ, mmiri na-asọ mgbe niile, ire na-ada. Nke nta nke nta, ogwe aka na-egbu ahụ, ọrịa na-agbaji, ọrụ obi na nkịta nwụrụ. Ụdị ụdị ụbụrụ a na-adịkarị site na 3 ruo 11 ụbọchị.
N'ịbụ onye na-arịa ọrịa na-egbu egbu ma ọ bụ nke ụlọnga nkịtị, otu nkịta na-arịa ọrịa na mbụ nwere ike ịdị na-ahụ ya n'anya ma na-emetụ. Ọ na-agbasi mbọ ike na-egbu ya na aka onye nwe ya. Nke nta nke nta, anụ ahụ na-ada ụra. Ihe ịrịba ama mbụ nke rabies na nkịta bụ salivation dị ukwuu na-esiri ike ilo ma na-akwa ụdọ ala. Ụdị ụdị ụzụ a bụ ngwa ngwa: nkịta na-anwụ n'ime ụbọchị abụọ ruo ụbọchị anọ mgbe ọrịa ahụ gasịrị.
Ụdị nke ụbụrụ nke mbụ nwere mgbaàmà nke enteritis ma ọ bụ gastritis na ịme agbọ na ọbara afọ ọsịsa. Ya mere, o siri oke ike ikpebi ụdị ụkọ a.
Oge nkwụsị nke ụbụrụ na-aga n'ihu na nkịta pụrụ ịdịru ogologo oge: site na izu atọ na isii. Ụfọdụ ụmụ anụmanụ nwere ike ịdịgide ruo otu afọ. Na nwa nwa, ọ dị mkpụmkpụ - site na ụbọchị atọ ruo ụbọchị asaa.
N'ihe nkedo nruta nke nkịta na nkịta, ọ ghaghị ịhapụ ya ma mee ngwa ngwa mee ka ọ mara ọrịa nwere ike imere ya. Ruo ụbọchị iri, ọ dị mkpa ịhụ nkịta ahụ. Ọ bụrụ na a hụghị ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke ọrịa, mgbe ahụ nkịta adịghị arịa ọrịa. N'aka nke ọzọ, a na-etinye ụra anụ ahụ ụra.
Kedu ka e si ebute rabies na nkịta?
Ọrịa na ụkọ nsị na-eme site na mmiri, ọbara na mmụba nke ndụ nke anụ ahụ. Mmadụ na-arịakarị ọrịa a mgbe ọnwụrụ na - arịa ọrịa riri ya: Ọbara nke anụ ahụ ga-esi na akpụkpọ ahụ mebiri emebi, site na ya na n'ime ọbara.
Mgbe mmadụ na-agbaji onye nkịta na-arịa ọrịa, ọ na-amalite ịda mbà mgbe ọ na-elo. Ọbụna na anya ma ọ bụ ụda nke mmiri na-agbapụta na mgbata, e nwere spasm nke larynx na e nwere hydrophobia. Onye na-arịa ọrịa ahụ anaghị adị jụụ na ọbụnakwa na-eme ihe ike, o nwere nkwarụ nke usoro iku ume. Ọganihu nke rabies na-esonyere na mkpọnwụ na ọnwụ na-eme.
Ọ bụrụ na ọ bụ na nkịta riri gị , saa ya na ncha n'okpuru mmiri mmiri ma ọ dịkarịa ala minit 10. Ejila ihe mgbochi na ọnya ma ọ bụ dochie ya. Anyị ga-aga ụlọ ọgwụ ozugbo enwere ike.
Ugbo na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie - olee otu esi emeso ya?
Otitis na nkịta
Azụ maka nkịta na aka aka ha
Aha maka umu aja
Enteritis na puppies
Russian Black Terrier - ụdị nkọwa
Nkịta kachasị elu n'ụwa
Nnukwu ụlọ nwamba
Cage maka aka nke chinchilla
Parrot Parrot - elekọta na ọdịnaya, ndụmọdụ bara uru
Zephyr na-enye nwa ara
Na ihe ị na-enweghị ike iri egusi na n'ihi gịnị?
Kedu otu esi eme ka mkpụrụ osisi flax ghara idi?
Egbugbere ọnụ ọnụ - gịnị ka ị ga-eme?
Achịcha na poteto na eyịm
Mgbachi na okirikiri
Ndị uwe agbamakwụkwọ kacha mma 2016
Wepụ ya ozugbo: egwu egwu dị egwu na ụwa nwoke
Uzo ụmụaka site na May 9 na aka ha
Gooseberries - iche
Osisi na-eto eto na-emeghe ala
Gym maka ndị na-amalite
Jam si walnuts dị mma
Akpo ntutu isi
Ọnọdụ Mmekọahụ maka Ndị Nwanyi Na-enuputa
Basic okpomọkụ wodrobu 2014